Farmaajo: Soomaaliya waxay ka dagi la'dahay mucaarad wax dumiya iyo faragelin shisheeye - Guuguule News Network
Farmaajo: Soomaaliya waxay ka dagi la’dahay mucaarad wax dumiya iyo faragelin shisheeye
(Guuguulenews)Farmaajo: Soomaaliya waxay ka dagi la’dahay mucaarad wax dumiya iyo faragelin shisheeye
Madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta hadal ka jeediyay Shirweynaha Culimada Soomaaliyeed uga furmay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Soomaaliya ay haystaan dhibaatooyin caqabad ku noqday in Soomaaliya ay horumar Gaadho.
Madaxweyne Farmaajo waxaa uu sheegay iney Soomaaliya ay ka dagi la’dahay laba caqabadood oo haysta:
“Dhibaatooyinka aan qabno waxaa weeye dhaqan xumo siyaasiyiinta ah ama siyaasadeed, oo aan la garaneyn qofka siyaasiga waxa uu mucaaradnimo u yaqaanno iyo dumin” ayuu yiri madaxweynaha.
“Mucaaradku waa wanaagsan yahay in fikir lagu kala duwanaado qof walbana ra’yigiisa uu soo jeediyo oo uu ka hadlo barnaamijyada iyo ajandooyinka uu aaminsan yahay xalkana uu ku daro oo uu yirahdo dowladda qodobbadaasi wey ku khaldan tahay xalkuna waa kow, labo iyo seddex.”
“Taasi mucaaradnimo ma aha waa qof wanaagsan oo doonayo inuu gacan ka geysto dowladnimada dhismaheeda, laakiin dumin ayaa jirta oo dowladnimada oo dhan jiridda loo gooyo oo loo diido xasilooni.”
“Isla markaana la billaabo waxyaabaha aan naqaanno oo qalalaasyo siyaasadeed iyo khilaafaad dalka gelinaya oo laga hadlo dowladda oo dhan in la beddelo oo beesha caalamka loo tago oo lagu dacweeyo taasi mucaaradnimo ee waa dumin taasina waxay ka mid tahay caqabadaha na haysto.” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Dhinaca kale wuxuu yiri madaxweynaha, “waxaa na haysta faragelin shisheeye oo muddooyinkii ay dowladnimada naga burburtay kaddib caada noqotay maadaamaa aan tabardarnaannay in ay cidwalba isku daydo wixi ay ka heli karto ama saameyn ama dhaqaale ama dana kale iney Soomaaliya faragashato.
“Haddii ay xitaa ku heshiin lahaayeen iney Soomaaliya lugaheeda ku istaagto waxba ma ahaateene iyaga laftooda ayaa iisu diidaya maxaa yeelay mid walba wuxuu rabaa saameyn ka badan kan kale inuu lahaado iyo anaga oo u fududeynay oo dadkeenna inta badan ay aamineen haddii ay beesha caalamku garab taagneyn aysan dhaqaaqi karin.”
“Taasoo keentay iney dad badan isdhiibaan shisheeyana iisu dhiibaan Soomaalida lafteedana ay wax iisu oggoleyn.” ayuu yiri madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.